Maxaa Laga Filan Karaa Kulan Caawa Champion League Kooxaha Arsenal V Barcelona | Hangool News
Maxaa Laga Filan Karaa Kulan Caawa Champion League Kooxaha Arsenal V Barcelona
February 23, 2016 - Written by Hangool
Champions(HangoolSports) Kulanka: Arsenal v Barcelona
Kooxda Arsenal waxaa dhaawacyo kaga maqan Santi Cazorla, Gabrieal, Wilshere iyo Rosicky halka Arteta aan la ogeyn waxa dhabta ah ee uu la dhiban yahay. Theo Walcott ayaana caawa la filayaa inuu tababare Arsene Wenger ku soo bilaabo isagoo ka garab ciyaari doona Ozil iyo Sanchez kuwaasoo dhamaantood caawinaya gooldhaliye Giroud.
dhanka kale Ozil iyo Giroud waxa ay seegi karaan lugta labaad ee Camp Nou haddii ay calaamada hurdiga ah qaataan kulanka caawa, si la mid ah Joel Campbell inkastoo aan la fileynin inuu ciyaari doono caawa.
Dhanka kooxda Barcelona waxaa dhaawac muddo dheer kaga maqan Rafinha oo ka xanuunsanaya jilibka halka Arda Turan uu kulankaan ku seegayo ganaax. Gerard Pique ayaana seegi doona kulanka lugta labaad ee Camp Nou haddii calaamada hurdiga qaato caawa.
Kooxda Gunners ayaa raadineysa inay gaarto wareega 8da markii ugu horeysay tan iyo 2010.
Waxa ay u soo baxeen wareega 16ka xilli ciyaareedkii 16aad ee isku xigta waxaana ku mahadsan guushii 3-0 ee ay ka gaareen Olympiacos 9kii bishii December.
Arsenal ayaa laga badiyay lugta hore ee gurigooda seddexdii kulan ee wareega 16ka ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen FC Bayern München (2013, 2014) iyo AS Monaco FC (2015).
Kooxda ku soo baxday kaalinta koowaad ee Group E ayaa ah mid ka mid ah labada kooxood ee kaliya iyadoo aan laga badinin ka soo baxay wareega group-yada.
Kooxda Catalans ayaa raadineysa inay gaarto wareega 8da Champions League xilli ciyaareedkii sagaalaad oo isku xiga.
Rikoorka ay Barcelona ka heysata kulamada ay martida u tahay kooxaha Ingariiska ma ahan mid fiican waxaa laga badiyay 14 kulan waxaana ay badiyeen 8 kulan halka 8 kulan kale ay barbaro ku galeen carada Ingariiska.